vehivavy | ny tsy manam-petra tontolo izao voarindra
Posted in vehivavy . toerana . teraka
ny mafana, Tiako nanafana.
Ary tsy izahay tsy hanitsaka intsony.
mpisorona, mpaminany sy ny poeta
Ho afaka hamantatra ny tsirairay.
Ny olon-drehetra dia manome ny fiainana ka tsy hiantra ny fotoana,
Tsy mety raha andro ho avy ny hamonjy sy.
hetsika gadona – ary ny miaramila anarana -
Manome antsika fahazavana – faharoa fahafahana hahazo.
Koa aoka ny mazava mamirapiratra foana
Eo imasonao ny fitiavana. nandritra ity
fiainana, fahasambarana, fahasambarana sy ny fahombiazana
mandray Matrix – ny tenany hiteraka Planet.
(Marina Tsvetaeva nanome)
Vehivavy noforonina miorina amin'ny-teraka. Izany no rafitra misy, izay afaka manao anglisy, hiditra vaovao, fivarotana vaovao: rafitra manome ny mety mitahiry ny niteraka vahaolana, formalized valiny. Indro dia ny vehivavy.
Izany ihany koa voalaza ao amin'ny soratra fahiny, fa ny vehivavy – siny ity, kapoaka, concavity.
raha olona mitady, fiofanana, antontan-kevitra isan-karazany ny fitrandrahana ao amin'ny endriny sy ny teny – vehivavy dia manangona sy ny fivarotana. Ny tena asa ny vehivavy: fitehirizana sy ny famindrana ny misy fanazavana araka izay marina tsara araka izay azo atao, fanangonan-karena ny fifandraisana ara thematic.
By hiatrehana ny toe-voatendry asa sy ny tanjona manokana ny vehivavy manana toetra tsara ny taova. Ny iray izay “maditra member”. Inona no, kosa, Tsy mamela izany ny mamindra miverimberina vaovao, efa tsy mandreraka. Vavy vatana manana somary kozatra maro ny sela.
Vehivavy foana ny mitady hahazo bebe kokoa fanazavana vaovao, manangona izany na aiza na aiza (ary, na dia, izay dia tsy azo). Noho ny zavatra indraindray tsy mahazo ho tena toe-javatra tsotra, “karohy” fa, ho toy ny fitsipika, dia tsy maintsy ho an'ny olona.
Indraindray ny vehivavy dia toy izany ambaratonga lehibe ny te hahafanta-javatra, fa toe-javatra hafahafa dia mety ho ny planeta iray manontolo. Rehefa afaka izany, dia matetika tsy mety hanome fanampiana mba avy amin'ny vokatry ny korontana. Tsy Mora kokoa ny mandà ny fahamelohana sy hanome ny endriky ny tsy fahazoan-kevitra, Zava-dehibe toy izay ny, izay tonga teo amin'ny fanavotana.
Vehivavy mitady haka azy vonona vaovao, efa niforona vahaolana, tranobe. Amin 'ny fitsipika,, amin'ny fanangonana sy mampiely vaovao ny vehivavy tsy manan-tsahala. Toy izany ny vehivavy dia.
Raha ny marina dia misy antony, vehivavy somary manana angovo be dia be. Inona moa no ambony noho ny boloky hazo ny olona. Indrindra noho ity vehivavy ity dia afaka manao be dia be ny asa. No-brainer momba ny vokatry ny asany. Mety hiteraka korontana.
Raha misy vehivavy mahazo olana – dia mitady ny haingana mahazo hatramin'ny farany. ary, raha amin'ny faran'ny mendrika board – Vehivavy mitady handrava haingana amin'ny solaitrabe ity. Dia toy izany no handika ny avy na aiza na aiza dia miankohofa, ho azom-pahoriana. Ao io vehivavy io dia tsy afaka miaina ara-dalàna ny fiainana raha tsy misy olona.
mihitsy, vehivavy tsara tarehy tsotra voafitaka. Ary no mora foana fa tsy noterena. Ny tena tsara tarehy amin'ny vehivavy mifono zava-miafina sy mahagaga Lodges. Amin'ny tsy mampino sy ny vokatra mialoha. ohatra: “Dia mitarika fandidiana eo amin'ny ADN, ary hanitrika ho amin'izao tontolo izao ny herin'ny maizina sy ny mampino!” Noho izany, 70% ny tena manjavona, ary ny vehivavy kosa no mampino revo amin'ny takatry ny saina tain-drendrika. Ary raha misy olona tsy miraharaha ny vehivavy – Ihany koa izy ireo mitsoraka ho azy. Dia toy izany no mahatonga ny fandrosoana mahagaga rehetra milomano ao amin'ny ara-panahy mahatalanjona slags diso.
Any vehivavy, ary koa ny teraka, misy ny, noho nanenika. Ary raha misy vehivavy feno fitiavana, zavatra misy fitiavana, Information voaendy sady namorona ny fitiavana – Ary ny vehivavy Mamirapiratra Fitiavana. Ary dia manao izy tsara. fa, raha misy vehivavy dia feno tratran'ny mpanara-baovao, Manary ho ambany – ny fako sy ny angovo ihany dia mizara.
Ny fitsaboana, misy ny fomba fanao amin'ny zava-mahadomelina fiankinan-doha fitsaboana. Vehivavy ao amin'io fomba fanao hita fa tsy ny tsara indrindra. Ary raha misy olona manana fampahiratana tranga – vehivavy ity olana ity. Izany dia vokatry ny fahamarinan-toerana ny vaovao dia tsy ny taolana. izany hoe. Vehivavy ahitana be dia be ny hery, fa ny vaovao kely Stability. Ao izany, ny vehivavy dia mora kokoa ny fitaovana.
Izy ireo dia mora ho refesina ny, izay miavaka ho azy ireo eo amin'ny natiora. Accounting, vinavina, fanangonana sy ny zavatra hafa. Ireo izay mifandray amin'ny maro “tsy mavesatra” zavatra.
teraka, misy lehibe maro eo amin'ny fiainana amin'ny teny, Maneho Planet. Rehefa FAMINTINANA Feminine Fitsipika misy vehivavy misy Energy- Planet. Amin'izay, dia azo niady hevitra, fa ny vehivavy – Planet ity.
Ahoana no Planet, mihetsika ao amin 'ny mihodina, Vehivavy teo amin'ny ambaratonga ambony dia angovo dia sehatry na peratra.
vehivavy – foana angovo marary mitsika ny World, izay dia. Etỳ ambonin'ny fisehon'ny ny tombontsoan'ny vehivavy ny, satria vonona ho amin'ny fampiasana: dia afaka hanampy ho efa-teraka.
vehivavy – ny lasitra. Ny tena tanjona – Store sy ny Ray reny ny fitiavana.
Ny vehivavy dia afaka hiarahaba mandrakizay. Ary nandray ny Iraisam-pirenena ny andron'ny vehivavy 8 Marta, ianao dia mbola afaka miantso “Infinity March”, izay mifanaraka amin'ny isan'ny Arahabaina amin'izany andro izany.